नेपालले कसरी अघि बढाउला एमसीसी र बीआरआई ? - Pardafas
नेपालले कसरी अघि बढाउला एमसीसी र बीआरआई ?
सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता यी दुई देशबीच त्यति सम्बन्ध बिग्रिएको थिएन, जति कोरोना महामारीको दुई वर्षमा बिग्रियो । यस बीचमा चिनियाँ सीमा बन्द भएपछि नेपालका व्यवसायीले पटकपटक विरोध गरे । चीन सरकारसँगको बढ्दो व्यापारघाटा पनि नेपालको चिन्ताको विषय बनिरहेको थियो ।
यति नै बेला नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेपछि यी दुई देशबीचको तनाव चरम अवस्थामा पुग्यो । यसको पुष्टि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको २५–२७ मार्चको नेपाल भ्रमणले गर्छ । भ्रमणको क्रममा वाङले नेपाललाई बाहिरी हस्तक्षेपको बारेमा चेतावनी दिए, जसले नेपाल र चीनको मूलहितलाई खतरा थियो ।
नेपाल चीन र भारतबीच तटस्थ रहोस् भन्ने चीनको चाहना छ । साथै, चीनविरोध मोर्चाबाट पनि बचोस् भन्ने उसको अपेक्षा छ । केहीको आशंका छ, अमेरिकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विरुद्धमा नै एमसीसीलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।
बीआरआईमा नेपाल पनि एक हस्ताक्षरकर्ता हो । अर्कोतर्फ नेपालले एमसीसीको सहयोग पनि लिएको छ । नेपालको मान्यता छ, एमसीसी परियोजनाबाट भारतसम्म विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गर्न सकिनेछ । जसबाट विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ भने निरन्तर आयस्रोत हुनेछ ।
नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि बेइजिङले बीआरआई अन्तर्गत केही परियोजनाहरूको लागि ऋण स्वीकार गर्न नेपाललाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले ऋण नभई चीनबाट अनुदान मात्रै आयोजना चाहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालले ऋण लिनुपर्ने भएमा २ प्रतिशतभन्दा बढी न्युन ब्याजदरमा सफ्ट वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ऋण बेइजिङबाट मात्रै उक्त देशले स्वीकार ग¥यो । उसले बीआरआई अन्तर्गतका यस्ता परियोजनाहरू मात्र चाहन्छ, जुन बोलपत्रका लागि सबैका लागि खुला होस्, अन्य बीआरआई परियोजनाहरूमा जस्तै चिनियाँ कम्पनीहरू मात्र होइन ।
चीनबाट ऋण निरुत्साहित गर्ने नेपालको चिन्ता साँचो देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को दोस्रो त्रैमासिकसम्म मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ४०.५३ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन २०१५–१६ को अवस्थालाई २५ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै अंकित गर्दा तुलना गर्दा निकै चिन्ताजनक छ ।
नेपालले अहिले नेपालमा अलपत्र परेका विभिन्न चिनियाँ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको प्रश्न पनि उठाएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपपछि उनीहरुलाई चीनबाट निकालिएको हो । चीनले उनीहरूका लागि कक्षाहरू पुनः सुरु गर्न थोरै प्रयास गरेको छ ।
चीनसँगको व्यापार सन्तुलनमा नेपालको ठूलो घाटा छ । सन् २०२०–२१ मा नेपालले चीनबाट २३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरे पनि सो अवधिमा नेपालले १ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सामान निकासी गरेको थियो । चीनसँगको मुलुकको व्यापार घाटा २३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल व्यापार घाटाको १४ प्रतिशत हो ।
कोभिड–१९ को प्रकोप देखिएदेखि नै दुई देशबीचका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छन् । यससँगै चीनसँगको सीमानाका तातोपानी–झाङ्मु र रसुवागढी–केरुङ नाका बन्द भएकाले दुई देशबीचको जनसामान्य आवतजावतमा समेत बाधा पुगेको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको बढ्दो हस्तक्षेपप्रति नेपाल चिन्तित छ । रणनीतिक तथा परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले एमसीसी सम्झौतालाई नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय मात्र नभई आन्तरिक मामिला भएको नबुझेर बेइजिङले ‘अनावश्यक, कूटनीतिक र शत्रुतापूर्ण टिप्पणी’ गरेको बताए ।
सहयोगतर्फ साना कदम
यद्यपि यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, चीन–नेपाल विद्युत् ग्रिडको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत गरी नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनमा आयात हुने ९८ प्रतिशत सामानको लागि अन्तरसम्बन्ध र भन्सारमुक्त तथा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चार वर्षभित्र बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन् ।
सन् २००६ देखि निष्क्रिय रहेको सीमा निरीक्षण संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न पनि चीन सहमत भएको छ । साथै चीनले नेपाललाई ती समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
अर्को सम्झौतामा नेपालले चीनमा घाँस निकासी गर्न सहमत भएको छ । हेलेज एक प्रकारको घाँस हो, जुन तिब्बतमा घोडा, याक र बाख्राहरूलाई खुवाउन पशु चाराको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसमा उच्च पोषक तत्व भएकाले यसले जनावरमा दूध उत्पादन बढाउँछ । नवलपरासी, गोरखा र दाङ जिल्लामा पनि उत्पादन हुने चितवन जिल्लामा घाँस उत्पादनमा केही चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेका छन् ।
एकातिर अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वी र अर्कोतर्फ भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई हेर्दा यी सबैसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न नेपालका लागि चुनौती बनेको छ । यसले यी शक्ति केन्द्रहरू मध्ये एकलाई अर्कोको लागि विरोध गर्न सक्दैन । विगत ७५ वर्षदेखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार भएकोले नेपालमा अमेरिकाको भूमिकालाई कम गर्न मिल्दैन ।
त्यसैगरी चीन र भारत निकटका छिमेकी भएकाले पनि महत्वपूर्ण छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनालाई अस्वीकार गरेर जुन कडा अडान लिएको छ त्यो राष्ट्रिय हितमा देखिन्छ र यसका लागि देउवा सरकारलाई उचित श्रेय दिनुपर्छ ।
हालको भू–आर्थिक र भूराजनीतिक खेलमा नेपालले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ र यी सबै शक्तिहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
हरिवंश झाले अब्जर्भर रिसर्च फउन्डेसनमा लेखेको आलेखको भावानुदित अंश । उनी ओआरएफका भिजिटिङ फेलो हुन् । नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका पूर्व प्राध्यापक झाका चासोका क्षेत्रहरु नेपाल–चीन–भारत रणनीतिक मामिला, सीमा समस्या, द्वन्द्व र शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, बालश्रम, मानव बेचबिखनलगायत हुन् ।
कोरोना महामारीबीच पनि कसरी निश्चिन्त छ युएई ?
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प, नगर्ने काम नभन्ने (सङ्कल्प–पत्रको पूर्ण पाठ सहित)
नेकपा खारेजीको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश